Apple dia manome ny tsy ampoizina ary mandefa iCloud + ao amin'ny WWDC 2021 | Vaovao IPhone
Tamin'ny WWDC 2021 dia natokana ho an'ny iCloud sy Apple ID koa ny fotoana. Safidy ID Apple vaovao roa no efa nambara. Ny iray amin'izy ireo midira amin'ny kaontinao rehefa manadino ny teny miafinao ary iray hafa hamela ny mombamomba anao ho lova rehefa maty ianao. Natolotra koa io iCloud + un fonosana tolotra vaovao telo nampiana amin'ny drafitra iCloud ankehitriny mifandraika amin'ny fiainana manokana amin'ny Internet.
Fiarovana bebe kokoa sy fiainana manokana miaraka amin'ireo fiasa iCloud + vaovao
Nomena safidy i Apple ID fanaraha-maso ny kaontintsika amin'ny fianakaviana na namana mba hahafahantsika manome azy ireo ny mombamomba anay rehetra ary raha afaka maty izy ireo dia afaka mitantana izany. Ho fanampin'izay, safidy iray hafa no natolotra hamerina ny teny miafin'ny kaontinay rehefa tsy tadidintsika izany, manampy olona akaiky ho vavolom-bolantsika.
Natolotra koa io iCloud +, serivisy serivisy ampiana amin'ny famandrihana karama ankehitriny ary tsy mampitombo ny sandan'izy ireo izany. Ireto no fiasa vaovao:
Fampitàna mivantana: karazana ampinga virtoaly ahafahanao mizaha Internet sy milamina kokoa. Ny fanaovana ny fangatahanao virtoaly dia voahodina na aiza na aiza alehanao.
Afeno ny mailako: afeno ny adiresy mailakao manokana amin'ny alàlan'ny famoronana mailaka tsy mitongilana samihafa izay mankany amin'ny anao manokana.
HomeKit Secure Video: ampidiro fakan-tsary tsy voafetra hijerena ny HomeKit miorina anaty iCloud.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » WWDC 2021 » Apple dia manome ny tsy ampoizina ary mandefa iCloud + ao amin'ny WWDC 2021